Tu Tu Tha: ဝတ္ထုတို ၉
Sunday, September 14, 2008 | Labels: ဝတ္ထုတို |
This entry was posted on Sunday, September 14, 2008 and is filed under ဝတ္ထုတို . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
ရီရတယ်အမရေ့ ..အမြဲဖတ်ဖြစ်ပေမဲ့ အခုတခါမှ ပြန်ကော်မန့်ခဲ့တယ်။
အဟိ ရယ်ရတယ် ။ သူတို့က ဘာလို့ သူတို့ကို နှိမ်တယ်လို့ ထင်တာပါလိမ့် ။